I-10 roller coasters ephezulu - Umxholo E Iiphulo Zokonwabisa
I-10 roller coasters ephezulu
Eyona roller coaster ikhawulezayo eMelika
Ukuba uyakuthanda ukukhwela imincili kwaye uziqwalasele njengepaki yokuzonwabisa, emva koko uthathe ujikelezo nakweyiphi na yee-coasters ezi-10 eziphezulu e-United States mhlawumbi kuluhlu lwakho lwezinto oza kuzenza.
Uluhlu lwee-10 eziQhelekileyo ezijikelezayo
Kukho izitayile ezingenakubalwa zentsimbi kunye neeroller coasters kwaye nganye inomdla wayo kunye nesantya; kodwa yintoni eyenza ukuba ibe 'yeyona ilungileyo?' Ngaba owona mgama mde ukhawulezayo yeyona ilungileyo? Ngaba ubude obude obukhweleyo buhlala bungcono kunobo bufutshane? Ngaba ii-coasters zentsimbi zingcono kuneenkuni? Ukuba i-roller coaster ilungile ngenene, abantu baya kuthetha ngayo kwaye babambe umgca ukuyikhwela-kaninzi-ninzi. Baya kuthumela malunga nokukhwela kwi-Intanethi kwiindawo ezinje Youtube kwaye Isantya esiphezulu seRoller Coaster . Ezi coasters ziphakamileyo ziya kukwenza ukhwaze, zitshintshe amaqhina akho amhlophe kwaye yenze intliziyo yakho ibethe. Ezi coasters zezona zilungileyo zohlobo lwazo kuba zikushiya uphefumla, kwaye kwangaxeshanye, ufuna ngaphezulu.
Ipaki yesiQithi seKing Island
Imifanekiso yeWild Adventures Theme Park
Imifanekiso eqengqelekayo yeCool roller
1. UKingda Ka
Imagazini yexesha I-poll yee-coasters eziphezulu Utyhile ukuba uKingda Ka kwiiFlegi eziMathandathu eziBalaseleyo eJackson, eNew Jersey yeyona nto iphambili kwi-roller coaster. Yavulwa kwipaki yomxholo ngo-2005 kwaye yindawo enye yeenduli ezifikelela kubude beemitha ezingama-456. Inotyekelo lweenyawo ezingama-418 kwaye ifikelela kwisantya seemayile ezili-126 ngeyure kwimizuzwana engaphantsi kwemine. Yeyona coaster inde kwaye ikhawulezayo yohlobo lwayo, efanayo neCedar Point's Top Thrill Dragster.
I-Coaster Fanatics ibizwa ngokuba yi-El Toro roller coaster 'yeyona' roller coaster ilungileyo yohlobo lwayo. Izindlu ezi-Six Flags Great Adventure eJackson, eNew Jersey, le coaster yokhuni yahlukile kwii-coasters zesiko kuba yayenziwe kwangaphambili ngokuchasene nokuba zonke iindlela zayo zibekwe ngokwahlukeneyo. I-El Toro yakhiwa ngo-2006 kwaye iyehla eyeyona yesibini iyeyona iphambili kuyo nayiphi na i-roller coaster kwihlabathi liphela ngama-76 degrees. Imile i-188 yeenyawo, ifikelela kwisantya esiphezulu se-70 yeekhilomitha ngeyure kwaye inika abakhweli imvakalelo yokufumana ubunzima kunye namathuba alithoba azelwe ngumoya.
ICedar Point eSandusky, eOhio likhaya likaRaptor, i-coaster yentsimbi Ukuhanjiswa kwam kweRoller r ibonwa njengowona hambo wokugqibela. Eyakhelwe ngo-1994, i-Raptor yinto engatshintshiyo ehambayo eya kwii-57 zeekhilomitha ngeyure. Ukukhwela ngaphezulu kwemizuzu emibini ubude kwaye kukuwisa i-119 yeenyawo kwinduli yayo ephezulu. Iqulethe ii-corkscrews, ii-loops kunye ne-cobra roll. Kuba i-coaster eguqulweyo, inika abakhweli imvakalelo yokuba kwindawo yokubaleka ngokukhawuleza.
Amaxabiso eCoaster Grotto iBizzaro, ngaphambili ibisaziwa njengeSuperman-Ride ye-Steel, njenge-roller coaster ephezulu. Eyakhelwe kwiiflegi ezintandathu eNgilani, le coaster yesinyithi ineempawu ezimbini zangaphantsi komhlaba kwaye ifikelela kwisantya esiphezulu seemayile ezingama-77 ngeyure. Olu hambo lude oluziimitha ezingama-5,400 luba nokuhla okuphezulu kweenyawo ezingama-211 kwaye luziimitha ezingama-208 ubude. Ukuhla kwe-coaster kukude kunokuphakama kokukhwela kuba iyehla iye kwelinye lamatonela angaphantsi komhlaba.
5. Umbane obaleka umbane
ILos Angeles Times amaxabiso eHersheypark's Lightning Racer njengeyona roller coaster ilungileyo eMelika. Eyakhelwe ngo-2000 eHershey, ePennsylvania, le coaster inamaqhosha angama-3,400, ngalinye linama-90 eenyawo. Iicasters zokubaleka ziphume ziziimayile ezingama-55 ngeyure.
UCedar Point kaMaverick ukalwe ngeyona roller-coaster 'mega-engineer yokwenza ukuba ukhwaze' ngu Oomatshini abadumileyo . UMaverick uthathwa njengoyena ulungileyo kuba kuphela kwento enqabileyo emhlabeni ukuba nomsongo wehashe ojijekileyo, enye yeebhanki ezili-10 ezijikayo kwibhodi yentsimbi. Ukukhwela kwavulwa ngo-2007 kwaye kuneenyawo ezili-105 ukuphakama kwaye kufikelela kwisantya esiphezulu see-70 zeekhilomitha ngeyure.
Ebizwa ngokuba yi-Golden Ticket Award ngo-2009, i-Voyage kwi-Holiday World kunye ne-Splashin 'Safari e-Santa Claus, e-Indiana inemizuzwana engama-24.2 ye-airtime, ama-tunnel amahlanu angaphantsi komhlaba, ii-crossovers ezininzi kunye noluhlu lwamaconsi amakhulu. I-coaster ye-hybrid yeplanga ingama-6,442 iinyawo ubude, ime i-163 yeenyawo ubude kwaye ifikelela kwisantya sama-67.4 eekhilomitha ngeyure.
8. Umkhosi weminyaka eliwaka
Kwiikhilomitha ezingama-93 ngeyure, uMkhosi weMileniyam waseCedar Point umi ngeenyawo ezingama-310 ubude. Xa yayakhiwe kwipaki yomxholo weSandusky, eOhio ngo-2000, yayiyeyona ndawo inde kwaye ikhawulezayo yokuhamba ngentsimbi eMantla eMelika. Ikalwe enye yezona coasters zihamba phambili eUnited States nge Elona Melika liPhambili kunye nePhezulu le-10 .
Imagazini yoSuku lwaBasetyhini Ubekwe kwindawo yesilwanyana, ebekwe e-Kings Island e-Kings Island, e-Ohio, njengeyona ndawo iphambili. Ithathwa njengeyona roller coaster inde emhlabeni, egubungela iihektare ezingama-35 kunye nokuhamba okungama-7 400 eenyawo. Ukukhwela kuphantse kube yimizuzu emihlanu ubude kwaye kufikelela kwisantya esiphezulu seemayile ezingama-70 ngeyure.
Isiqithi saseOhio saseOhio sisekhaya kwi-rollerback coaster. Umxholo wePaki ngaphakathi ithathele ingqalelo le coaster yentsimbi njengeyona ndawo intle yokutsala ipaki ngo-2009. Ikuimitha ezingama-230 ubude, zii-5,282 iinyawo ubude kwaye iphakama ngeekhilomitha ezingama-80 ngeyure. I-Diamondback inamaconsi ali-10 ubunzulu beenyawo ezingama-215.
ungatsho ukuba intombazana ayintombi
Olu luhlu lwee-coasters ezi-10 eziphambili aluluhlu olubandakanya konke. Zininzi ezinye iinyithi zentsimbi kunye neenkuni ezenziwe ngokhuni phaya ezinomdla njengalezo zidwelisiweyo. Ukuba kukho i-roller coaster oziva ukuba yeyona nto iphambili, shiya inqaku malunga nayo kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
Eyabantu Izacholo Ukusilela Kwevitamin D Ubudlelwane Imibuzo Autism Kanye Bantwana Amanqaku Ewayini
ukuba ngumthengisi wejackjack
ingakanani ipesenti yotywala yiwayini
Iitreyini zabasetyhini zithengiswa kufutshane nam
imisebenzi eqeshayo eneminyaka eli-13 ubudala
uyithenga phi i-charles shaw wine
kuthatha ixesha elingakanani uqhawulo-mtshato ukuba bobabini bayavumelana